Qaamuuska ereyada daryeelka caafimaadka Context link | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Waxqabadyada Nolol Maalmeedka (ADLS)
Waxqabadyada la qabto iyagoo qayb ka ah hawl maalmeedka qofka ee is-daryeelka, sida qubeyska, labbiska, xaajo gudashada, ka wareegida iyo u wareegida sariirta iyo wax cunnista.
Qof qiyaaso khataraha iyo carbuunta caymiska.
Bukaanka diiwaangashan, inta badan waxaa la dhigaa ugu yaraan 24 saac, isbitaalka, xarunta kalkaalinta caafimaadka ee xirfadlaha ama xarun kale oo daryeelka caafimaadka.
Adeegyada ka dambeeya isbitaal dhigista ama baxnaaninta.
Daryeelka aan bukaan-jiifka ahayn ee laga helo goobaha ka degdeg yar isbitaalka ama xarun kale oo bukaan-jiif (sida xarun-maalmeedka qalliinka).
Codsiga rasmiga ah ee dib-u-eegista tallaabada marka aadan ku qanacsanayn go'aanka uu gaaray qorshaha caafimaadkaaga.
Daryeelka Caafimaadka Habdhaqanka
Qiimaynta iyo daawaynta cilladaha dhimirka ama ku xadgudubka muqaadaraadka.
Ka-faa'idaystaha / Samadheefsadaha
Qofka qaata macaashyada caymiska.
Xaddiga ama qadarta adeegyada uu qofku xaqa u leeyahay iyadoo lagu salaynayo heshiiska uu kula jiro qorshaha caafimaadka.
Isuduwidda daryeelka waa isku biirinta dadaallada bixiyayaasha, shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo ururada bulsheed (CBOs) si ay u abaabulaan oo si wax-ku-ool ah isaga kaashadaan macluumaadka bukaanka, baahiyaha caafimaadka, iyo hawsha si ay u siiyaan daryeelka ugu fiican ee suurtogalka ah bukaankaas.2
Shirkad maarayso ama iibisa barnaamijyada macaashka caafimaadka.
Habka loo aqoonsado bukaanada qaba baahiyaha daryeelka caafimaadka ee gaarka ah iyo la shaqaynta iyaga iyo dhakhaatiirt-a(ooda) si loo bixiyo daawaynta ugu fiican ee suurtogalka ah.
Kalkaaliyaha, dhakhtarka ama shaqaalaha bulshada ee la shaqeeya bukaanada, bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka, dhakhaatiirta iyo caymiyeyaasha si loo go'aamiyo oo la isugu dubarido qorshaha daryeelka caafimaadka. Sidoo kale loo yaqaano isuduwaha daryeelka.
Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicaid (CMS)
Wakaalada dawladda dhexe ee mas'uulka ka ah maamulida Medicare iyo kormeerida maamulka gobolka ee Medicaid.
Shahaadada Caymiska (COC)
Sharaxaad ku saabsan macaashyada ku jira qorshaha caafimaadka.
Barnaamij macaash oo dhammaystiran oo loogu talagalay ku dhowaad 6.7 milyan carruur ah oo aan caymis haysan oo ku sugan dalka oo dhan1. U-qalmida barnaamijka inta badan waxaa loo go'aamiyaa dhaqaale ahaan, waana inay dawladda dhexe bixiso daryeelka aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, adeegyada caafimaadka habdhaqanka, iyo tallaalada carruurta laga bilaabo dhalashada ilaa 19 jirka.
Macluumaadka uu soo gudbiyay bixiyaha ama qofka caynsan oo lagu saleeyo adeegyada caafimaadka ee gaarka ah ee la siiyo bukaanka oo codsiyada lacag-bixinta.
Xasuusta ama sababaynta oo yaraata.
Lacagta ku soo aado caymis haystaha
Boqollayada kharashka adeegga ay tahay inaad siiso bixiyaha adeeggaas.
Lacagta go'an ee caymiska (Lacagaha go'an ee caymiska)
Qadar lacag ah oo aad siiso dhakhtarka markaad booqanayso.
Magaca loogu talagalay tallaabo ku jirta qorshaha daawoyinka dhakhtarku qoro ee Medicare Part D ee aad bixiso dhammaan lacagaha kharashaadkaaga daawooyinka aad u-qalanto.
Taariikhda daryeelka caafimaadka la siiyay qofka caynsan.
Lacagta caymiska ee la jari karo
Qadarta kharashka habboon ee qofka caynsan ay tahay inuu ka bixiyaa jeebka sannad kasta kahor inta uusan qorshuhu bixinin.
Shakhsiga ugu tiirsan xubin taageero dhaqaale iyo/ama hela caymiska caafimaadka iyadoo loo marayo qof ay is qabaan, waalid ama awoowe xubin ah.
Xaalad kasta oo sababta xaddidaado dhaqdhaqaaq taasoo carqaladaysa awoodda qofku uu ku gudan karo shaqadiisa caadiga ah taasoo xaddidaad la taaban karo u keenta hal ama wax ka badan waxqabadyada nolosha ee waaweyn.
Qiimaynta baahiyaha caafimaadka ee bukaanka si loogu diyaariyo daryeelka ku haboon kadib marka laga saaro goobta bukaan-jiifka.
Daawo Ku Jirta Diiwaanka Daawada
Liiska daawooyinka dhakhtarku qoro ee uu doorbiday in la isticmaalo qorshaha caafimaadka oo la bixiyo iyadoo loo marayo farmashiyaha qandaraaska lala galay ee la siiyo dadka caynsan.
U-qalmida Laba Caymis
U-qalmida labada caymis waxaa loola jeedaa u-qalmida shakhsiga inuu iska diiwaangeliyo barnaamijyada Medicaid iyo Medicare labaduba. Shakhsiyaadka u-qalma labada barnaamij waxaa caadi ahaan loogu yeeraa laba caymis haystayaasha ama dadka u-qalma labada caymis.
Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (DSNP)
Qorshaha u gaarka ah Medicare Advantage oo loogu talagalay laba caymis haystayaasha ama dadka u-qalma labada caymis. Iyadoo ugu wacan tahay in dabiici ahaan inta badan adag yihiin baahiyaha daryeelka bulsheed, maskaxeed, iyo jireed ee laba caymis haystayaasha, DSNPs waxay ka caawiyaan in hal meel laga helo daryeelka labada barnaamij iyo in la bixiyo daryeel diiradda saaraya bukaanka kaasoo loo qaabeeyay inuu sahlanaado si loo dhex mushaaxo.
Taariikhda heshiisku bilaabanayo.
Taariikhda la cayimay ee xubinta u-qalmo macaashyada sida ku cad heshiiska jira.
Barnaamijka Kaalmada Shaqaalaha (EAP)
Adeegyada loogu talagalay in lagu caawiyo shaqaalaha, xubnaha qoyskooda, iyo shaqo-bixiyayaasha si ay u helaan xalalka loogu talagalay goobta shaqada iyo dhibaatooyinka gaarka ah.
Qadarta shaqo-bixiyaha ku daro kharashaadka caymiska ee qorshaha caafimaadka.
Qof ka diiwaangashan caymiska hoos yimaada heshiiska qorshaha caafimaadka.
Xaalado ama duruufo gaar ah oo caymisku ama qorshuhu uusan dabooli doonin ama lacag-celin ka bixin doonin.
Sharraxaada Macaashyada (EOB)
Bayaanka caymiska ee dhigaya adeegyada la bixiyo, qadarta la isku soo dallaco iyo lacagta la bixiyo.
Xarunta Daryeelka La Muddo Kordhiyay
Hoyga kalkaalinta ama xarunta kalkaalinta ee sharciyaysan oo sida caadiga ah bixisa daryeelka kalkaalinta 24-saac maalintii. Waxaa laga yaabaa inay bixiso daryeelka xirfadlaha, dhexdhexaadka ah ama haynta ilmaha ah, ama isku darka mid kasta oo heerarkan daryeelka ah.
Kordhinta Muddada Macaashyada
Qoddob u oggolaanaya caymiska caafimaadka in la sii wado markuu dhaafo taariikhda dhammaadka caymiska ee loogu talagalay shaqaalaha aan shaqada ku jirin iyo dadka ku tiirsan ee isbitaalka la dhigay taariikhdaas.
Goob dhismooyin ku yaalaan oo lagu bixiyo daryeelka ama adeegyada caafimaadka, sida isbitaalka, rugta caafimaadka, qolka gargaarka degdegag ah ama xarunta daryeelka bukaan-jiifka.
Eeg liiska daawada.
Qofka U-qalma Labada Caymis ee Sida Buuxda Isugu Dhafan (FIDE)
Qofka gaarka ah ee u-qalma labada caymis ee ka hela macaashyada Medicare iyo Medicaid ee isku dhafan hal hay'adda daryeelka la maareeyo (MCO) ah iyadoo loo marayo qorshaha labada geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee isku dhafan, ama FIDE-SNP. FIDEs iyo FIDE-SNPs waxay gacan ka geystaan wanaajinta iyo kala furfurka macaashyada iyo shuruudaha inta badan ay adag tahay in la dhex mushaaxo ee wehliya noqoshada qof u-qalma labada caymis.
Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (FIDE-SNP) ee Sida Buuxda Isugu Dhafan
Eeg FIDE (kor).
Daawada guud way ka qaalisan tahay daawada wadata magaca shirkadda waxaana lagu iibiyaa magac caam ah ama "guud" oo loogu talagalay daawadaas. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa daawada u-dhiganta daawada guud.
Bayaankaaga ku qanacsanaan la'aanta qayb kasta oo ka mid ah daryeelkaaga. Cabashada waxaa lagu soo gudbin karaa telefoonka ama qoraal ahaan, waana in si toos ah loogu soo diraa qorshahaaga.
Xirmada Macaashyada Caafimaadka
Adeegyada iyo caymiska qorshaha caafimaadka uu siiyo koox ama shakhsi.
Lacag-bixinta macaashyada ee loogu talagalay jirrada ama dhaawaca la daboolo. Tani waxa ku jiri kara daryeelka ilkaha, caafimaadka iyo aragga, iyo sidoo kale macaashyada kale.
Xeerka Wareejinta Caymiska Caafimaadka iyo La Xisaabtanka (HIPAA)
Sharciga dawladda dhexe ee loogu talagalay in lagu wanaajiyo helitaanka iyo xasilloonida caymiska caafimaadka.
Ururka Joogtaynta Caafimaadka (HMO)
Shirkad siisa ama u qabanqaabiso adeegyada caafimaadka xubnaha ku jira qorshaheeda.
Ururka joogtaynta caafimaadka, ururka bixiyayaasha la doorbido, qorshaha caymiska, qorshaha is-maalgelinta ama koox kale oo daboosha adeegyada daryeelka caafimaadka.
Hay'adda Caafimaadka Guriga (HHA)
Xarun ama barnaamij sharciyaysan, shahaado haysata ama sida kale la oggolaaday si waafaqsan sharciyadda gobolka iyo dawladda dhexe si ay ugu bixiso adeegyada daryeelka caafimaadka gudaha guriga.
Xarun ama barnaamij bixiya daryeelka loogu talagalay bukaanada dhimanaya.
Lumin kasta ama wax kasta oo aan caadi ahayn oo ku yimaada qaabdhismeedka ama shaqaynta maskaxeed, jireed ama qaabka jirka (tusaale, maqal la'aanta).
Adeegyada Laga Helo Aagga
Daryeelka caafimaadka ee lagu helo goobta adeegga ee idman ee laga helo bixiye heshiiska kula jira qorshaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa adeegyada ku jira shabakadda.
Shakhsi la dhigay isbitaal oo loo diiwaangeliyay bukaan sariir saaran ahaan ugu yaraan 24 saac oo helaya adeegyada uu jiheeyo dhakhtarka.
Kaalmada iyo daryeelka loogu talagalay dadka qaba naafonimada. Hadafka daryeelka muddada-dheer waa in la caawiyo dadka qaba naafonimada si ay ugu noolaadaan sida ugu madax-bannaan oo ugu macquulsan. Wuxuu si aad ah diiradda u saaraa daryeelida marka lala barbardhigo daaweynta.
Kharashaadka Jeebka laga bixiyo ee ugu badan
Xaddiga saaran wadarta lacagaha go'an ee caymiska, lacagaha caymiska ee la jari karo iyo lacagta ku soo aada caymis-haystaha ee uu bixiyo xubinta ee hoos timaada heshiiska macaashka.
Barnaamijka dawladda dhexe oo ay bixiyaan oo maamulaan dawlad-goboleedyada kaasoo siiya macaashyada caafimaadka ee loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo ee u-qalma ee u baahan daryeelka caafimaadka. Kharashaadka barnaamijka waxaa wadaaga dawladda dhexe iyo dawlad-goboleedyada.
Barnaamijka caymiska caafimaadka ee ka jira dalka oo dhan, ay dawladda dhexe maareyso kaasoo daboola kharashaadka isbitaalka, daryeelka caafimaadka, iyo adeegyada la xiriira qaarkood ee loogu talagalay dadka u-qalma, inta badan shakhsiyaadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn iyo dadka naafada ah ee da'doodu ka yar tahay 65 jir.
Qofka ay u arkeen Sugnaanta Bulshada inuu xaq u leeyahay inuu helo macaashka Medicare.
Caymiska Kabbista ah ee Medicare
Caymiska uu bixiyo caymiyaha ee guud ahaan siiya caymis-haystaha lacagta ku soo aada caymis-haystaha ee Medicare, lacagta caymiska ee la jari karo iyo lacagaha go'an ee caymiska ee Medicare Part A iyo B waxaana laga yaabaa inuu bixiyo macaashyo dheeraad ah, iyadoo ku xiran tahay caymiska.
Qofka isku diiwaangeliyay qorshaha caafimaadka inta lagu jiro muddada isdiiwaangelinta. Xubnaha waxaa ka mid ah dhammaan dadka sida tooska ah u diiwaangashan (isdiiwaangaliyayaasha/rukumadayaasha) iyo dadka ku tiirsan ee u-qalma. Sidoo kale loo yaqaano qofka caynsan iyo kaqaybqaataha qorshaha.
Bixiyaha Caafimaadka Maskaxda
Dhakhtarka dhimirka, dhakhtarka la-talinta dhimirka ee sharciyaysan, shaqaalaha bulsheed, isbitaalka ama xarun kale oo si sax ah u sharciyaysan oo u-qalanto inay bixiso adeegyada caafimaadka maskaxda ee hoos yimaada xadka awoodda sharciga taasoo daawaynta lagu helo.
Nidaamka dhakhaatiirka, isbitaallada iyo bixiyeyaasha daryeelka kabbista ah ee daryeelka caafimaadka siiya xubnaha.
Bixiyaha Ku Jira Shabakadda
Bixiyaha heshiiska kula jira qorshaha caafimaadka si uu adeegyo caafimaad u gaarsiiyo dadka caynsan. Bixiyuhu wuxuu noqon karaa dhakhtarka, isbitaalka, farmashiyaha, xarun kale ama bixiye kale oo daryeelka caafimaadka. Sidoo kale loo yaqaano bixiyaha ku jira shabakadda ama bixiyaha kaqaybqaataha ah.
Ka Baxsan Aagga Adeegga (OOA)
Caymiska loogu talagalay daawaynta uu u helo qofka caynsan si kumeelgaar ah oo ka baxsan aagga adeegga ee shabakadda.
Ka Baxsan Shabakadda (OON)
Caymiska guud ee loogu talagalay daaweynta laga helo bixiyaha aan heshiiska lagula jirin. Caadi ahaan, waxaa loo baahan yahay bixinta lacagta caymiska ee la jari karo iyo lacagaha go'an ee caymiska iyo lacagta ku soo aado caymis-haystaha marka loo eego daawaynta laga helo bixiyaha heshiiska lagula jiro. Qorshayaasha caafimaadka qaarkood ma bixiyaan macaashyada daawaynta ka baxsan shabakadda, marka laga reebo xaaladaha degdegga ah.
Kharashyada/Kharashaadka Jeebka Laga Bixiyo (OOPS)
Qaybta lacagaha loogu talagalay adeegyada caafimaadka ee la daboolo ee looga baahan yahay inuu bixiyo is-diiwaangeliyaha, oo ay ku jiraan lacagaha go'an ee caymiska iyo lacagaha caymiska ee la jari karo.
Qofka adeegyada daryeelka caafimaadka ka hela isbitaalka ama xarunta qalliinka ee goonida ah iyadoo aan isbitaalka la dhigin.
Daawada Laga Gato Dukaanka (OTC)
Baddeeco daawo ah oo aan loo baahnayn rijeeto sida ku cad sharciga dawladda dhexe ama gobolka.
Bixiyaha Kaqaybqaadanaya Caymiska
Bixiyaha heshiiska kula jira qorshaha caafimaadka si uu adeegyo caafimaad u gaarsiiyo dadka caynsan. Bixiyuhu wuxuu noqon karaa dhakhtarka, isbitaalka, farmashiyaha, xarun kale ama bixiye kale oo daryeelka caafimaadka. Sidoo kale loo yaqaano bixiyaha shabakadda ama bixiyaha ku jira shabakadda.
Hay'ad bixisa kharashka caymiska daryeelka caafimaadka.
Dhakhtar kasta oo caafimaad (M.D.) ama dhakhtarka lafaha iyo murqaha (DO) kaasoo sharciyaysan oo aqoon leh sida ku cad sharciga.
Xaalad Horay U Sii Jirtay
Xaalad kasta oo caafimaad oo la ogaaday ama la daweeyay muddo cayiman gudaheeda. Xaaladaha horay u sii jiray waxaa laga yaabaa inaan la daboolin muddo cayiman (sida caadiga ah lix ilaa 12 bilood).
Qadarta uu xubinta siiyo caymis-qaadaha si uu u bixiyo caymiska sida ku cad heshiiska.
Daawo ay ansixiyeen Maamulka Cuntada iyo Daawooyinka oo awoodda u leh, taasoo noqon karta, sida ku cad sharciga dawladda dhexe ama gobolka, inuu bixiyo kaliya dhakhtar sharciyaysan ama xirfadle kale oo awood u leh.
Daryeelka Kahortagga ah
Daryeelka caafimaadka ee xoogga saara kahortagga, ogaanshaha hore iyo daawaynta hore ee xaaladaha, guud ahaan ay ku jiraan baaritaanka jireed ee caadiga ah, tallaalka iyo daryeelka fayo-qabka qofka.
Daryeel caafimaad oo aasaasi ah ama guud, oo sida caaddada ah ay bixiyaan dhaqtarka qoyska, dhaqaatiirta carruurta iyo dhakhaatiirta cuddurada qalliinka u baahnayn.
Dhaqtarka, isbitaalka, dhaqtarka kooxeed, hoyga kalkaalinta, farmashiyaha ama shaqsi ama koox kasta oo bixiya adeegga daryeelka caafimaadka.
Ka-faa'iideystayaasha U-qalma Medicare (QMB)
Qofka dakhligiisu ka hooseeyo 100% kan tilmaamaha saboolnimada ee dawladda dhexe, kaasoo ay tahay in gobolku ka bixiyo carbuunada caymiska, lacagaha caymiska ee la jari karo iyo lacagaha ku soo aado caymis-haystaha ee Medicare Part B.
Qadarta lacageed ee kala-soocid diiwangelin ee kasta ee la siiyo caymis-qaadaha si loo helo caymiska caafimaadka. Sicirrada sida caadiga ah waxaa loo soo dallacaa bil kasta wayna isbeddeli karaan.
Tallada ay bixiyaan dhakhtarka iyo/ama qorshaha caafimaadka ee qofka caynsan si looga helo daryeel dhakhtar ama xarun kale. Mararka qaarkood waa loo baahan yahay si looga helo daawaynta takhasuslayaasha iyo daaweynta ka baxsan shabakadda.
Macaashyada ay shaqo-bixiyayaasha ka bixiyaan shaqaalahooda hawlgabka noqday.
Fikradda caafimaad ee xirfadlaha daryeelka caafimaadka ee kale – si loola barbardhigo baaritaanka caafimaadka.
Adeegyada ay bixiyaan takhasuslayaasha, sida dhakhaatiirta wadnaha, dhakhaatiirta kaadi-mareenka iyo dhaqaatiirta maqaarka, kuwaasoo guud ahaan marka hore aan daaweynin bukaanka.
Goobta uu adeego ka bixiyo qorshaha caafimaadka.
Xarunta Kalkaalinta ee Xirfadlaha (SNF)
Xarun qaabisha bukaanada u baahan baxnaaninta iyo daryeelka caafimaadka.
Qorshaha Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (SNP)
Qorsheyaasha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha dadka la nool hal ama ka badan oo jirro daba-dheeraatay ah kuwaasoo sidoo kale u-qalma Medicare.
Sharraxaada Kooban ee Qorshaha
Sharaxaad ku saabsan dhammaan xirmada macaashka uu heli karo shaqaalaha haddii loo baahan yahay.
Goob la deggan yahay ama aan la degganeyn oo bixisa daawaynta adeegsiga maandooriyaha ama cudurrada maskaxda.
Daryeelka Degdegga ah
Daryeel beddel u ah daryeelka gurmadka degdegga ah ee isbitaalka ee loogu talagalay in loo adeegsado xaaladaha aan degdegga ahayn. Waxaa la adeegsadaa marka xaaladaha caafimaadka degdeg yihiin, balse aysan ahayn kuwo caafimaadka-ama nafta halis gelinaya.
Ku laabo qaybta sare bogga
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.18.2022 waqtiga 12:47 GALABNIMO CDT